ओमकार टाइम्स अस्ट्रेलियाकी आनि भन्छिन् : अस्ट्रेलियामा बुद्ध धर्म मौलाउदैछ, नेपालमा क्रिस्चियन – OMKARTIMES
अस्ट्रेलियाकी आनि भन्छिन् : अस्ट्रेलियामा बुद्ध धर्म मौलाउदैछ, नेपालमा क्रिस्चियन
काठमाडौं । हजारौं नेपालीका लागि स्वर्गजस्तो देश हो अष्ट्रेलिया । त्यो देश जाने होड चलिरहेछ तर एउटी अष्ट्रेलियाली महिलाका लागि भने नेपाल स्वर्गीय भूमि हो, धर्मथलो हो । उनी हुन् मौरिन ।
उनी अष्ट्रेलियाकाे मेलवर्नकी हुन् । अहिले घरबार र सांसारिक जीवन त्यागेर नेपालमा आनी बनेकी छिन् । अष्ट्रेलियामा मौरिनका लागि सबैथोक थियो, सम्पूर्ण भौतिक सुख सुविधा थियो तैपनि ठूलो अभाव थियो ।
उनलाई अभाव थियो– मानसिक शान्तिको । मानसिक शान्ति पाइन्छ सत्यको बाटोबाट । र, त्यो बाटो खोज्दै जाँदा एक तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु भेट भए । उनले सल्लाह दिए– नेपाल जानुस् ।
मौरिनले नेपाल देश सुनकै थिइनन् । केही थाहा नभएको र नाम समेत नसुनेको देश नेपाल आइन् । त्यसपछि सुरु हुन्छ मौरिनको आध्यात्मिक यात्रा । त्यो यात्राको पहिलो विन्दु थियो काठमाडौंको कपन गुम्वा ।
त्यहाँ मौरिनले वौद्ध धर्म ग्रहण गरिन् । मौरिनलाई नयाँ जीवन पाएको महशुस भयो । गुरुहरुले नयाँ जीवनमा उनलाई नाम दिए– लोब्साङ डेम्छोग ।
यो लेखनीमा यहाँ उप्रान्त मौरिनलाई लोब्साङ देम्छोग नामले सम्वोधन गरिनेछ ।
लोब्साङ अष्टे«लियाको मध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मिएकी थिइन् । सानैदेखि जिज्ञासु लोब्साङमा किशोरी भएपछि सत्य र शान्तिको मार्गबारे जान्ने उत्सुकता जाग्न थाल्यो । समयक्रम सँगै उनको परिवार आर्थिक रुपमा सम्पन्न भयो । उनी जन्मिदा गाउँ रहेको मेलवर्न पनि विकसित हुँदै भव्य शहर बन्यो ।
अष्टे«लियाले उन्नति गर्यो, लोब्साङको परिवार धेरै नै धनी भयो । लोब्साङले विवाह गरिन्, सन्तान भयो तर मनभित्र शान्ति र सत्यको खोजी जारी रह्यो । बौद्ध धर्म ग्रहण गरेर लोब्साङ बनेपछि उनको गृहस्थ जीवनको यात्रा पनि टुंगियो र आध्यात्मिक यात्रा सुरु भयो ।
जीवनमा भौतिक सुखका उपकरण थपिँदै जादा समाज झन् झन् व्यक्तिवादी हुँदै गयो । तर, लोब्साङको मनलाई व्यक्तिवादी समाजमा बस्न पटक्कै मानेन । त्यसपछि उनी सत्यको खोजीमा निस्कने निर्णयमा पुगिन् ।
त्यतिबेला मौरिनको भेट एक जना तिव्वती गुरुसँग भएको थियो ।
ती गुरुले बौद्ध दर्शनको किताब दिँदै शान्तिको खोजीमा लागेको हो भने नेपाल जानु भने । मौरिन अलमल्ल परिन् । शान्ति र सत्यको खोजी गर्ने चाहना यति प्रबल थियो कि उनी नेपाल आइन् ।
नेपाल आएपछि उनको ह्रदयभित्रको द्धन्द मत्थर हुन थाल्यो । गुम्वामा ध्यानमा बस्ने निर्णय गरिन् ।
जति ध्यान गर्याे, उति सत्यको मार्गमा हिँडेको महशुस गर्न थालिन् । ज्ञान र ध्यानमा डुब्न थालेपछि जीवनलाई यही मार्गमा लगाउँछु भनी निर्णय गरिन् । लामा जोपा रिम्पोछेबाट दिक्षा लिइन् ।
सन् २००७ को कुरा हो यो ।
त्यसपछि, उनी बाैद्ध ज्ञान र शान्ति बाँडेर जीवन विताइरहेकी छन् । यी ज्ञानी–ध्यानी महिलासँग वौद्धमार्गका अध्येता सूर्य लोप्चन तामाङले अन्तर्वार्ता लिएका छन् । अन्तर्वार्ताको सारसंक्षेप :–
अष्ट्रेलियामा बौद्ध धर्मप्रतिको बुझाइ कस्तो छ ?
अष्ट्रेलियालीहरु हरेक कुराले सम्पन्न छन् । भौतिक सुखसयलमा उनीहरुलाई अहिले कसैले जित्न सक्दैन । पहिला चीनियाँहरुको प्रभावमा बौद्ध दर्शन फैलिए पनि आजभोलि अष्ट्रेलियनहरु आफैं शान्तिको मार्ग खोज्दै बौद्ध धर्म अंगालिरहेका छन्, अष्ट्रेलियामा वौद्ध धर्म फैलिरहेको छ ।
अहिले नेपालमा धर्म परिवर्तन गरेर इसाई धर्म लिनेहरुको संख्या बढ्नुको कारण के हुन सक्छ ?
पश्चिमा देशहरुले कुनैपनि देश र जातजातिको विकासका लागि धर्म परिवर्तन गराइरहेका छैनन् । उनीहरु सोझासीधा र गरिव मानिस भएको ठाउँमा समाज सेवाको नाममा प्रवेश गर्छन् । समाजसेवाको खोल ओढेर धर्मको प्रचार गर्दै व्यक्तिको धर्म परिवर्तन गराउन तिर लाग्छन् । अहिले नेपालमा यही भइरहेको छ ।
कुनै पनि भुगोल÷समाजमा प्रवेश गरेपछि उनीहरु धेरै समूह बनाएर व्यापार सुरु गर्छन्, व्यापारमा बलियो बनेपछि राजनीतिमा हात हाल्छन् । उदाहरणका रुपमा भारतलाई लिन सकिन्छ । पहिले उनीहरुले केही मानिसहरुलाई प्रभावमा पारेर धर्म परिवर्तन गराए । चर्च बनाए । क्रिश्चियनहरुको संख्या बढेपछि उनीहरुले इष्ट इण्डिया कम्पनी स्थापना गरे, व्यापारमा लागे, पैसा कमाए, चर्चको साम्राज्य पनि फैलाउँदै लगे । त्यसपछि राजनीतिमा हात हाले । अन्तत दुई सय वर्षसम्म भारतलाई गुलाम बनाए ।
धर्म परिवर्तन गर्नेहरुले यो कुरा बुझ्नुपर्छ ।
नेपालमा किन भ्रममा पारेर धर्म परिवर्तन गराउने खेल भइरहेको छ ?
पश्चिमाहरुले धर्म प्रचारका लागि एसियाली मुलुकहरु छान्नुको मुख्य कारण यस क्षेत्रका मुलुकहरुको राज्यसत्ता हातमा लिनका लागि हो जस्तो लाग्छ । त्यसै गरी प्राकृतिक स्रोतमाथि कब्जा गर्न पनि उनीहरुले एसियाली मुलुकहरु छानेका हुन् जस्तो लाग्छ ।
पश्चिमाहरु विश्वका धेरै मुलुकमा धर्मको नामबाट राजनीति र प्राकृतिक स्रोतमाथि कब्जा गर्न सफल भए । नेपाल राजनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण र प्राकृतिक रुपमा सम्पन्न छ । पश्चिमाहरु जे चाहन्छन्, त्यो सबै नेपालमा छ । नेपालमा प्रभाव पार्न सकियो भने भारत र चीनमा पनि प्रभाव पार्न सकिन्छ । त्यसैले नेपालमा धर्म परिवर्तनको खेल भइरहेको हो भन्ने नेपाली जनताले बुझ्नुपर्छ ।
अर्काे कुरा, क्रिष्चियनहरु मुस्लिमहरुसँग डराउँछन् । नेपालमा मुस्लिमको संख्या तुलनात्मक रुपमा थोरै छ । नेपालमा आफूहरुले भन्दा पहिले मुस्लिमले धर्म फैलाउँछन् भन्ने उनीहरुलाई डर छ । त्यसैले मुस्लिमलाई उछिन्न नेपालमा क्रिश्चियनहरुले छिटोछिटो धर्म फैलाइरहेका छन् ।
सोझा र गरिव जनताको ठूलो जमात रहेको नेपाली समाजमा पश्चिमाहरुले सजिलै प्रभाव पार्न सफल भइरहेका छन् । यसकारण पनि पश्चिमाहरु जोडतोड साथ नेपालमा धर्मको राजनीति गर्न लागिपरेका छन् । यदि तत्काल यसको विरुद्धमा कदम चालिएन भने भविष्यमा नेपालले ठूलो दुर्गति भोग्नुपर्ने देखिन्छ ।
क्रिष्चियनहरुले कसरी धर्म परिवर्तन गर्न व्यक्तिलाई वाध्य बनाउँछन् होला ?
क्रिष्चियन मिशिनरीहरुले समाजसेवालाई हतियार बनाउँछन् । समाजसेवा गरेको जस्तो गरेर जनतामा भ्रम फैलाउँछन् । परम्परागत धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज खराब हो भन्ने देखाउँछन् । आफ्नो धर्म संस्कृति त्यागेर क्रिश्चियन धर्म अपनायो भने मात्र स्वर्ग गइन्छ नत्र नर्क गइन्छ भनेर झुठा कुरा भन्छन् । आफ्ना धर्म र रीतिरिवाज राम्रो भन्न् र अरुको धर्म संस्कृतिलाई अन्धविश्वाश भन्छन् । वास्तवमा क्रिश्चियन मिशिनरीमा लागेका मानिसहरु चाहिँ अन्धविश्वाशमा फसेका छन् ।
नेपालका उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका तामाङ, शेर्पा, ह्योल्मो लगायत अन्य कथित साना जात र पिछडिएको समुदायलाई लक्षित गरेर धर्म परिवर्तन गराइरहेका छन् । पूर्वका राई, लिम्बू लगायत अन्य समुदायलाई पनि विशेष सिकार बनाइएको छ ।
नेपालीहरु कसरी तुरुन्त धर्म परिवर्तनमा लाग्छन् ?
धर्म दुई किसिमका हुन्छन् । भित्री र बाहिरी । बौद्ध धर्म भित्री किसिमको धर्म हो । यसमा अभ्यासहरुको विशेष महत्व हुन्छ । तर क्रिष्चियन धर्ममा बाहिरी तामझामलाई बढी महत्व दिइन्छ । सो धर्ममा लागेमा धन, दौलत, सुख र रमाइलोमा जीवन जीउन सकिन्छ ।
मिडिया क्षेत्रलाई उनीहरु धर्म परिवर्तनको माध्यमको रुपमा लिन्छन् । मिडिया मार्फत, तामझाम र सुखी जीवन देखाएर उनीहरु सहजै व्यक्तिलाई प्रभावमा पार्छन् । मानिसहरु पनि सहजै क्रिश्चियन धर्मको पासोमा पर्छन् ।
नेपाल तथा विश्वमै प्रलोभनको आधारमा धर्म परिवर्तनलाई रोक्न कस्तो कदम चाल्न सकिन्छ ?
नेपालमा धर्म परिवर्तनलाई रोक्न सबैभन्दा पहिला त धर्म परिवर्तन गराउन नपाइने कडा नियम बनाइनुपर्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरको गैरसरकारी संस्था खोल्दा त्यस संस्थाको नियतको राम्रो अध्ययन गरेर मात्र खोल्ने अनुमति दिनुपर्दछ । कुनैपनि विदेशी व्यक्ति र संस्थालाई आँखा चिम्लेर विश्वास गर्नु हुँदैन ।
नेपालका गुम्बा र मन्दिरमा बसेर शान्तिको पाठ पढाउने लामा, पुरोहितहरु मन्दिर र गुम्बामा नबसेर गाउँगाउँ डुलेर शान्तिको मार्गको उपाय प्रत्येक व्यक्तिलाई बताउनुपर्छ । नत्र लामा र पुरोहितहरु मन्दिर र गुम्बामा अनि विदेशीहरु गाउँ गाउँ पुगेर धर्म परिवर्तन गराउँदैछन् ।
नेपालमा युवा पुस्तालाई धर्मको मार्गमा, सत्य र शान्तिको मार्गमा लगाउन थालिहाल्नुपर्छ । उनीहरुलाई धर्म के हो भन्ने बुझाउनुपर्छ ।
तथ्य नबुझी धर्म परिवर्तन गर्नेहरुलाई तपाईंको सुझाव के छ ?
धर्म परिवर्तनलाई हलुका रुपमा लिन हुँदैन । नत्र भोलिको दिनमा धर्म परिवर्तन गराउँदै उनीहरु सरकारमै पुग्न सक्छन् । उनीहरु सरकारमा पुगे भने नेपाललाई धेरै खतरा हुनसक्छ ।
अमेरिका र वेलायतमा धर्म परिवर्तन गराउन नपाइने नियम छ । तर नेपालमा खुल्लम खुल्ला धर्म परिवर्तन गराउने काम भइरहेको छ । सरकारले तुरुन्त नियन्त्रण गर्ने नियम बनाउनुपर्छ ।
पश्चिमाहरुको इतिहास हेर्याे भने, उनीहरुले क्रिष्चियन धर्म मार्फत पुरानो धर्ममात्र होइन, पुरानो सरकार, संस्कार र संस्कृति नै परिवर्तन गराउँदै आएको आएको दृश्यको प्रमाण सबैसँग छ ।
नेपाल बुद्धको भूमि हो, यो भूमि क्रिश्चियनहरुलाई खोस्न दिन हुँदैन । नेपालीको भूमिमाथि अरुलाई अधिकार जमाउने छुट नेपालीले दिनु हुँदैन । नेपालीले यो कुरा बुझेनन् भने उनीहरुको धर्म संस्कृति पहिचान सबै हराउँदै जानेछ ।